Jery ​​todika amin'ny zavatra manaraka ao amin'ny Xfce 4.12 | Avy amin'ny Linux
Rayonant | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, About us
Tamin'ity herinandro ity, nipoitra ny vaovao somary mahaliana momba ny fivoaran'ny fampiharana Xfce sasany ho an'ny tsingerina 4.12, izay nanome ahy ny hevitra hanao famintinana ny fizotran'ny fampandrosoana ankapobeny azy amin'ny vaovao sy ny zavatra niainako manokana satria Mampiasa ny fonosana isan-karazany amin'ny alàlan'ny ppa aho.
Aza adino fa amin'izao fotoana izao dia mbola ao anaty fitsapana ireo fonosana ary tsy atolotra ho an'ny tontolo milamina satria afaka manolotra lesoka izy ireo, na izany aza ho an'ireo izay te hanampy amin'ny fanandramana sy ny tatitra ny lesoka rehetra dia ao anaty pejy GIT tetikasa, ho an'ireo mpampiasa Xubuntu dia misy ny mpamorona ppa saingy tadidio fa ilaina ny manana Xfce 4.10 teo aloha
1.0.2 Lisitry ny filalaovana
5 Fitambaran-dàlana fitendry
6 Fanohanana teratany ho an'ny mode extensions amin'ny configurations Multi-Monitor
Ilay mpilalao haino aman-jery Xfce dia nivoaka tamina kinova vaovao izay tsy vitan'ny fanitsiana bibikely sasany (toy ny fanala miaraka amina dikanteny vitsivitsy izay nanjo ahy matetika) fa miaraka amin'ireo endrika vaovao marobe ihany koa:
Tantaran'ny rakitra sy ny toerana
Famantarana sy fametrahana codec tsy hita
Ampidino dikanteny manokana (teo aloha dia azo natao ihany ny nametraka azy ireo tamin'ny anaran'ny horonan-tsary mitovy amin'ny toerana iray)
Fanohanana ireo playlist CD sy DVD
Plugin fampandrenesana vaovao
Fijery vaovao amin'ny filalaovana endrika audio
Fomba haingo vaovao hampiasaina ohatra amin'ny mpizaha tranonkala (toy ny azo atao amin'ny Totem na Xine, fa amin'ity tranga ity dia tokony hatao avy amin'ny mozplugger)
Parole amin'ny fahitana playback Audio (tsy raharahianao ny hadisoan'ny fandikan-teny, alefa ny fanamboarana)
Fampifanarahana ampitaina amin'i Xfconf
Fanatsarana ny hitsin-dàlana fitendry
Ctrl + O Open Dialog
Ctrl + L Sokafy ny Dialog amin'ny toerana
Ctrl + Q Fivoahan'ny Parole
Lisitry ny filalaovana
F9 Asehoy / Afeno ny Playlist
Miakatra sy midina Browse Playlist
F11 Ampidiro ny efijery feno
Escape Mivoaka ny efijery feno
Havia havanana Fikarohana afovoany miverina / mandroso 10 segondra
Ctrl + Havia / Havanana Fikarohana afovoany miverina / mandroso 1 minitra
0 (enina) moana
- (Kely kokoa) Ahenao ny volanao
+ (miampy), = (mitovy) Ampitomboy ny volanao
Afaka mahita famaritana misimisy kokoa momba ireo fiasa vaovao sy pikantsary bebe kokoa ianao ao amin'ny Bilaogy Sean Davis izay niasa mafy tamin'ity tetikasa ity. ary manao zavatra roa hafa koa izy satria miasa amin'ny fanavaozana ny lozisialy ny fisie rakitra ary manampy ny fahaizan'ny fanovana menio MenuLibre (izay ny tetikasanao koa) izay mety kokoa amin'ny tontolo iainana toa an'i Xfce sy Lxde
Topi-maso kely momba ny fanavaozana ny trondro
Niverina ny tonian-dahatsoratry ny tetikasa rehefa ela (efa ho 4 taona) izay noheverina ho efa maty ny fivoarany, tadidio fa ny Mousepad monina ao amin'ny Leafpad dia novolavolaina mba hanomezana fanohanana fanontana izay tsy ananan'ireto farany tamin'izany fotoana izany. Ary izao ny kinova 0.3.0 tonga miaraka amin'ireto vaovao manaraka ireto:
Famerenana fanoratana feno an'i Mousepad. Ny kaody izao dia voasoratra amin'ny GObjects hanana fototra mafy orina amin'ny fampandrosoana bebe kokoa.
Windows windows in a single instance
Fanohanana amin'ny fisarihana sy fandatsahana lahatsoratra ao anaty antontan-taratasy iray, eo anelanelan'ny kiheba sy eo anelanelan'ny varavarankely, ary koa amin'ny fanokafana rakitra amin'ny alàlan'ny fisintomana azy ao anaty varavarankely
Fanohanana ireo vakizoro marobe ao am-baravarankely, izay voaverina sy tsy azo esorina intsony.
Fanohanana ireo fisie vao napetraka indray. Ny tantara vao haingana dia azo esorina, ary nesorina ilay rakitra raha tsy afaka manokatra azy i Mousepad.
Fanohanana ho an'ny haingam-pandeha azo ovaina
Fanasongadinana Syntax ho an'ny karazana rakitra maro.
Fanohanana ireo volavolan-doko (toa ny Gedit)
Bara misy ny karazan-drakitra, ny toerana misy ny kora ary raha azo alefa ny fihoaram-pefy.
Mametraka rakitra marobe indray mandeha avy eo amin'ny dinika fanokafana sy ny tsipika baiko.
Mikaroha sy asongadino rehefa manoratra (ala Firefox) ianao
Mousepad 0.3.0 miaraka amina fiasa vaovao ao anatin'izany ny loko malalako Oblivion
Ny emulator Xfce terminal dia misy fiovana vitsivitsy ihany koa, ny mpanova ny hitsin-dàlana fitendry dia nesorina tamin'ny safidiny mba hampiasa ireo mpamadika voaova amin'ny menio izay mitantana ny tontolo iainana hanovana ny hitsin-dàlan'ny fampiharana (Thunar ohatra) ary ny fahaizana manitsy ny baraovana izay mamela ny fanesorana fiankinan-doha sasany. Seho iray tena mahaliana ho ahy ihany koa ny fahitana azy izao hanana 'drop-down' na drop-down mode amin'ny fomban'ny Yakuake !. Azo jerena ny doka eto
Ny terminal an'i Xfce azo ampitaina amin'ny fomba Yakuake sy ny sisa
Na dia tsy vaovao amin'ity herinandro ity aza ny fivoaran'ny Thunar aorian'ny fiovana lehibe amin'ny andiany 1.6 miaraka amin'ny fampidirana ny takelaka dia tsy misy mijanona, misy bibikely marobe namboarina toy ny hoe azo atao izao ny mijery ireo fananan'ny folder maromaro miaraka amin'izay. , ny fizarazarana rehetra dia aseho amin'ny tontonana na dia efa nitaingina fstab aza.
Ankoatry ny fanavaozana ny tontolon'ny tsoratadidy sy ny fahaizana mitahiry tsoratadidy amin'ny tambajotra, noho izany dia tsy ilaina intsony i Gigolo, ary koa ny fampidirana am-peo izay manome fanohanana tsara kokoa ho an'ny fitaovana sy fakan-tsarimihetsika Android.
Ho fanampin'izany, navoaka ny kinova Tumbler vaovao, izay manohana rakitra fanaingoana izao hifehezana ny laharam-pahamehana, ny haben'ny haben'ny file izay ampiasain'ny plugin, ary ny endri-javatra mahaliana iray hafa, afaka mahazo ny fonony ho an'ny sary kely amin'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny API an'ny Ny Database Misokatra Sarimihetsika o The Movie DB , na dia kilemaina noho ny toerana misy anao aza izy io satria mampiasa fampahalalana (Ny lohatenin'ilay sarimihetsika izay esoriny amin'ny anaran'ny fisie) handefasana azy amin'ny Internet ary ahazoana ilay afisy.
Tsy mampidi-doza ny vaovao nalefa, saingy nanokana toerana izy ireo dia nanapa-kevitra fa tsara ho an'ny mpampiasa ny manapa-kevitra. Raha mila fanazavana fanampiny dia zahao ny pejy ao amin'ny wiki.
Takelaka Thunar sy tontonana miverina nohavaozina
Ezahina ihany koa ny asa hanatsarana ny fikirakirana ny hitsin-dàlana amin'ny keyboard, indrindra ny fanamboarana bibikely sasany avy amin'ny fampiharana azy ireo amin'ny kinova 4.10 ary hamaritana ny labelin'izy ireo amin'ny interface, satria niseho tamin'ny anarany hoe system [Super, Kilonga]
Fanohanana teratany ho an'ny mode extensions amin'ny configurations Multi-Monitor
Ny Xfce vaovao izao dia mampihatra ny fanohanan'ny config multi-monitor ka tsy ho ilaina intsony ny mampiasa fitaovana fanampiny toa ny Arandr hanaovana ireo fanaingoana ireo. Ny fifanakalozan-kevitra voalohany dia aseho rehefa mifandray ny efijery vaovao ary manome fidirana haingana amin'ireo maody efatra fampiasa indrindra:
Dialogan'ny seho fampisehoana
Raha ilaina ny fanahafana hafa dia ampidirina amin'ny alàlan'ny fipihana eo amin'ny Advanced izay ahatongavan'ilay interface interface config mahazatra
Ho fanampin'izany, ireo famantarana mipoitra dia haseho ihany koa amin'ny faritra ambany amin'ny efijery tsirairay avy raha misokatra ny fifanakalozan-kevitra hahafantaranao hoe efijery inona no ovainay, mampiseho ireo ny anarana sy ny vahaolana:
Araho maso ny famantarana pop-up
Ho tonga ao amin'ny Xfce 4.12 izany rehetra izany fa mbola misy ihany ny fandraisana andraikitra izay na dia tsy nandroso aza izy ireo dia mahaliana amin'ny kinova amin'ny ho avy. Ohatra, kasaina hamolavolana endrika ny interface preferences amin'ny birao ary hahafahana misafidy rindrambaiko samihafa ho an'ny birao tsirairay, mamela ihany koa ny lohahevitra ho an'ny varavarankely Alt + Tab tahaka ny ataon'ny Kanelina sy ny KDE, na dia tsy mandeha aza izy io amin'izao fotoana izao ankoatry ny fanesoana vitsivitsy dia vaovao be rehefa dinihina ny fanovana, ny sasany amin'ireo tetikasa hafa dia azo jerena (indray mandeha) ao amin'ny Wiki avy any Xfce, raha nekena izy ireo na tsia ary ny vaovao momba ny fivoarany:
Tsy misy lahatsoratra (miaraka / tsy misy mpamoron-kira)
Miaraka amin'ny lahatsoratra
Inona sisa no ho vitako? Mazava ho ahy fa mazava ho azy fa ny Xfce dia lasa safidy tontolo iainana desktop fa tsy ny maivana loatra (izay mbola misy) fa nanova ny fifantohana avy amin'ny safidy maivana ho safidy feno ho an'ny birao maoderina ary Tsy isalasalana fa, ireo rehetra izay tsy nankafy nanandrana azy dia tokony hanao izany raha vantany vao mivoaka ny kinova vaovao (izay tokony ho eo am-piandohan'ny volana martsa raha mandeha tsara ny zava-drehetra ary tsy misy lesoka lehibe)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Jery ​​todika amin'ny zavatra manaraka ao amin'ny Xfce 4.12
Holmes dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray: rahoviana ny kinova 4.12? Holmes
Mamaly an'i Holmes
Araka ny fandaharam-potoana http://wiki.xfce.org/releng/4.12/roadmap ho an'ny volana martsa
Tena tsara Xfce .. tena nostalgic: '(ary azo raisina avy amin'izay hitako ..
Raha tsy avela any ambany i Xfce dia mbola mitazona ny fizarazaran'ny fitsapana KDE ao Chakra aho ary toa tena mandeha io, fa rehefa miverina amin'ny totozy aho dia mahatsiaro ho any an-trano 🙂
Ehh !! Avia chu chu, mivoaha eto miaraka amin'ireo hevitra izay tonga ao an-tsaiko .. xDDD
Miverena toy ny zanaka adala, fantatrao fa mbola tsy nahatsiaro tena ho afaka ianao. tpt
Tsia, tsia ary tsia .. Salama aho ao amin'ny hotely misy kintana 7.
Tsia, mahazo aina aho ao amin'ity trano fandraisam-bahiny misy kintana 7 an'ny krytô KDE SC ity. Rehefa mankaleo amin'ny pisinina aho, ny sakafo maimaim-poana, ny serivisy tsara ary ny fampitaovana rehetra dia miverina any amin'ny trano fonenana aho.
Hahahaha, ho hitantsika, ho hitantsika… hoy ny fotoana, fantatrareo fa «tsy misy mafy izay tsy manalefaka.
Tena tsara. Tena tiako ny zavatra tonga ho an'i Thunar sy ny multimonitor (amin'izao fotoana izao dia mila mampiasa ARandr aho). Saingy tsy dia tiako loatra ny lanja ampiasan'izy ireo amin'ny Mousepad. Ny zavatra tiako fotsiny dia tsotra izy io. Fa maninona no apetraka ao daholo izany raha misy editera hafa efa mahavita azy? Tsia, mila mametraka Leafpad aho (mandra-pahatongan'ny olona iray manana hevitra lehibe hanimba azy koa)
Eny, tsotra izany, nefa tsy novolavolaina efa ho 4 taona! Ankehitriny, araka ny nolazaiko hatrany momba ny tsiro loko, ny safidy atolotry mousepad ankehitriny dia mahasoa ahy, fa maivana kokoa noho ny tonian-dahatsoratra hafa. fa ho an'ireo izay tsy eo, ity leafpad, amin'ny maha-tonian-dahatsary an-tsoratra azy ity, dia mahavita tsara ny asany.
Mino aho fa amin'ny safidy maivana dia tsy mitovy ny takelaka ravina. Mousepad dia mitady toerana eo anelanelan'ny Leafpad sy Gedit. Toa tetika marina izany amiko.
Xfce dia ho ahy ny birao tsara indrindra aorian'ny hevitr'i KDE xd fanetren-tena
Tena azo ovaina izy io ary miaraka amin'izay dia maivana izy na dia hitanao aza fa misy ampahany tsy hita ao aminy
zavatra tiako ho hita dia ny globalmenu 😀
Manantena aho, ny mifanohitra amin'izay, fa tsy ho hitantsika mihintsy ny globalmenu ao Xfce.
Iray amin'ireo antony maro nanenjika ahy hiala gnome izany
Tena mahaliana sy mahaliana! fa tsy mbola niresaka momba ny fanohanan'ny GTK3 ianao: O
Raha fintinina dia io no birao tsara indrindra aorian'ny mahatalanjona; D
aaah ary miala tsiny amin'ny sary famantarana ny windoze, PC O_o indramina aho
Amboary aho raha diso aho tamin'izay, saingy azoko fa ny fifindra-monina mankany GTK3 dia tsy hatao amin'ny 4.12
Miombon-kevitra aminao aho, manome lalana XFCE handao ny stigma fahazavana (tsy hijanona ho maivana velively) ho birao iray tena feno sy mifaninana. Na dia tsy maintsy milaza aza aho fa tsy ratsy mihitsy ny fahazavana (na dia mbola tsy ampy aza).
Ampiasaiko amin'ny PC an-tranoko io ary tsy dia manana fitarainana aho, ny mifanohitra amin'izay no izy. Safidy tsara ho an'ireo izay mitady zavatra hafa.
Xfce dia naka ny solosainako rehefa avy ny loza gnome 3 nahatonga ahy, ankehitriny mampiasa ny version 4.10 aho ary vao mainka nifankatia ity tontolo mahafinaritra ity. Ny zavatra ratsy dia izao miaraka amin'ny lahatsoratranao, tiako hivoaka ilay 4.12: D. Misy mahalala hoe hafiriana no hanatanterahana ity tsingerina fampandrosoana ity? Misy fandaharam-potoana?
Araka ny efa noresahiko tao amin'ilay lahatsoratra, ny fanombohana dia tokony ho amin'ny fiandohan'ny volana martsa raha tsy misy ny fihemorana, ity ny fizotry ny wiki:
Ho ela velona XFCE ny birao milanja kilao tsara indrindra.
maxigens180 dia hoy izy:
Afaka miteny amiko ve ny olona hoe inona no foto-kevitr'ireo nalaina?
Valiny amin'ny maxigenios180
Ny lohahevitra ampiasaiko dia Greybird, fa ny kinova GIT an'ny Shimmer Project:
Ahh, nandatsaka ranomaso kely aza aho rehefa nahita an'ity ... T_T. Mieritreritra aho fa hanome ady an'i Gnome Shell izany, hiala ao amin'ny KDE aho hanandramako vetivety.
Sooooo tsara 😀
Ny zavatra dia lasa mahaliana loatra ... Tsy ho azoko an-tsaina mihitsy hoe hiafara amin'ny fitiavako an'i XFCE aho
Akaiky ny farany hivady.
Avy eo izy ireo dia hanafohezana ny tsingerin'ny famotsorana, tsara.
Ireto endri-javatra vaovao ireto dia tena milay ary tsara ho an'ny XFCE.
Tena tsara amin'ny XFCE. Tsy misy fisalasalana, ho ahy, ny birao tsara indrindra.
Tiako be ny XFCE fa ny tena marina dia, ho an'ny playback video sns. Mampiasa vlc aho izay niasa tsara foana ary ho an'ny mozika ilay sahisahy efa fantatra izay mandeha tsara ihany koa, (tsy tiako mihitsy ny playlists mandeha ho azy, na ny famoronana rakikira mandeha ho azy , sns). Afa-tsy ireo fitaovana ireo, ny sisa amin'ny fanatsarana dia mahatonga ahy ho XFCE bebe kokoa isan'andro.
ernest21 dia hoy izy:
Valio i ernest21
Salama Rayonant. Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratrao. Faly aho naheno zavatra momba an'i Xfce. Manoro hevitra anao aho mba handinihanao bebe kokoa ny tsipelina nataonao sy ny mari-piatoanao: misy lesoka maromaro amin'ny alàlan'ny default amin'ny alàlan'ny tildes, ny koma, ny fe-potoana ary ny iray amin'ireo marika manontany.
Ao amin'ny boaty fampitandremana eo am-piandohan'ny lahatsoratra dia manome toky anao aho mba tsy hampiasa fehezan-teny manomboka amin'ny infinitive: "Tsarovy izany ...". Amin'ity tranga ity, ny mpamaky, rehefa mijery ny latabatra, dia mahatakatra fa manana ny fiasa manasongadina fampahalalana manan-danja izy, noho izany dia azo atao ny manala ireo fotoana roa ampiasanao ny "tsarovy fa ...". Jereo, eto no amaritako azy nohatsaraina:
“Mbola eo am-pitsapana ireo fonosana ireo ankehitriny ary tsy atolotra ho an'ny tontolo milamina satria mety ho buggy izany. Na izany aza, ho an'ireo izay te hanampy amin'ny fitsapana sy ny fitaterana bibikely, ny kaody rehetra dia ao amin'ny pejy GIT an'ny tetikasa. Ho an'ireo mpampiasa Xubuntu dia misy ny ppa an'ny mpamorona; ilaina ny manana Xfce 4.10 »teo aloha.
Ao amin'ny fehintsoratra voalohany dia tsy nisy fe-potoana; dia toy ny hoe fehezanteny tokana ny fehintsoratra iray manontolo. Eto dia mizara ho fehezan-teny telo, ary ireo kosa dia manana koma izay manamora ny famakian'ny mpamaky. Manantena aho fa tsy handray ny fanitsiako amin'ny fomba diso. Afaka mianatra eto daholo isika ary tiako ny manolotra fanitsiana satria ity bilaogy ity dia manome fampahalalana kalitao; Tsy tiako ny mpamaky ho avy mba hanana fiheverana ratsy momba ny From Linux amin'ny alàlan'ny fanamarihana ny lesoka amin'ny fanoratana, ny mari-tsoratra ary ny tsipelina.
Manantena aho fa hanohy hizara fampahalalana bebe kokoa momba ny Xfce. Salama.
Ralehilahy, tsy nisy very intsony, ny fanakianana mahasoa dia tongasoa foana, tena miala tsiny aho noho ny lesoka tamin'ny tsipelina, tsy fombako izany, mandritra ny fotoana vitsivitsy dia hanome valiny fanampiny aho hanitsiana izany. manondro hanatsara. Misaotra betsaka noho ny hevitrao, hiresaka amin'ireo mpanelanelana aho hahitako raha afaka manitsy ny ampahany amin'ny lahatsoratra aho.
Salama indray, Rayonant. Aza manahy momba ny lesoka fa azo ahitsy foana izy ireo. Ary mazava ho azy fa avelan'ny mpanelanelana hanova azy ianao, heveriko fa tsy hanohitra izany.
Mazava ho azy fa nisy zavatra tsy hadinoko nolazaina anao, saingy lazaiko anao izao: ny lesokao dia tsy hoe satria diso ny tsipelina nataonao (litera diso), fa amin'ny alàlan'ny fanesorana: tsy apetrakao ireo lantom-peony ary tsy apetrakao ireo mari-piatoana. Amin'ity tranga ity dia mora kokoa ny fanitsiana sy fikarakarana horaisina amin'ny ho avy: manahy foana ny hanampy.
Mahereza ary azafady mba zarao bebe kokoa momba an'i Xfce.
Ho an'ireo izay nanontany momba ny fifindra-monina amin'ny GTK3, ny singa sasany dia efa natolotra ho gtk3-engine-xfce, na izany aza ny fitomboan'ny fanjifana ny loharanon-karena sy ny tsy fitovizan'ny mpamorona GTK (izay manova ny zavatra ifotony amin'ny kinova iray mankany amin'ny iray hafa) dia nahatonga ny xfce ireo mpamorona (miaraka amin'i Nick Shermer eo an-tampon-tànana) tsy dia mazava loatra momba ny fitaterana ny xfce rehetra mankany amin'ny kinova 3 amin'ny tranomboky.
Izany rehetra izany dia efa noresahana lava tao amin'ny lisitra fandefasa-mailaka, ary ny sasany aza nanolo-kevitra ny handefa ny rafitra any amin'ireo tranombokin'ny tetikasa Enlighment ary ny iray hafa mifidy ny handefa QT. Voaroaka ireo hevitra roa ireo noho ny tsy fahampian'ny asa sy ny fahaverezan'ny fitoniana.
Ary momba ny fijanonana ao amin'ny GTK2, na ho ela na ho haingana dia hafoana ny fikojakojana azy, rehefa matotra kokoa ny GTK3 (sy ireo mpamorona) ary tsy mila fanovana mahery vaika toy ny mitranga ankehitriny.
Ary aorian'ny horonam-boky teo aloha, ny fanovana izay tanterahina ho an'ny 4.12 dia ho azo ampiharina be (toy ny manana Terminal misy endri-javatra milatsaka) izay tsy hampiasa programa ad hoc (raha ny hevitro dia mampiasa guake aho) ary ny hafa kosa dia endrika "miseho milay" kokoa, toy ny manana fiaviana birao samihafa amin'ny birao birao.
Mikasika ny famotsoran-keloka dia tsy dia nampiasain'izy ireo izany satria ao amin'ireo kinova voalohany (fony namorona azy i Ali Abdalah), ny marina dia mijaly noho ny tsy fisian'ny toetra mampiavaka azy.
Ny olan'izy ireo dia mipetraka amin'ny fitoniany. Ary eo anoloana koa dia nanana VLC aho. Homeko fotoana vaovao izy ity rehefa mivoaka ny version 4.12.
Mousepad dia voafetra loatra. Izy io dia niaraka tamin'ny notepad Windows tamin'ny Linux. Ny nofy tamin'ny alàlan'ny rakitra fikirakirana somary lehibe niaraka taminy dia nofy ratsy. Ireo fanovana roa heveriko fa hahasoa ahy indrindra dia ny tabs sy ny fanasongadinana ny syntax. Ary ho an'ny asa sasany dia hamoaka ny VIm.
Na izany aza, raha misy mijery ny changelog isaky ny fonosana dia ho hitany fa ny ampahany lehibe amin'ny fanovana dia ny fanamboarana bibikely, izay manazava ny fitombanan'ny baomba ao amin'ny birao.
Toa tsara be ilay kinova Xfce vaovao. Te hijanona milamina amin'ny Debian 7 aho, saingy tsy maintsy miverina amin'ny fitsapana isika, tsy te hijanona aho raha tsy manandrana an'io kinova 4.12 io.
Fanontaniana adaladala hapetrako:
Inona no fomba marina hanoratana xfce?
XFCE, xfce na Xfce
Noho ny te hahafanta-javatra fotsiny. Misaotra anao.
Ity dia nalaina tao amin'ny wiki:
«Ahoana no fomba fanononana Xfce ary inona no dikan'izany?
"Ecks Eff See Eee." Ny anarana Xfce dia nijoro ho an'ny XForms Common Environment, saingy nanomboka tamin'izay dia nosoratana indroa i Xfce ary tsy mampiasa fitaovana XForms intsony. Mbola velona ilay anarana, fa ny F kosa dia renivohitra lava kokoa (tsy "XFce", fa "Xfce"). Amin'izao fotoana izao, ny fanafohezana dia tsy midika inona (sosokevitra: X Freakin 'tontolo iainana mangatsiaka).
Mbola tsy nisy na inona na inona nilaza momba ny fifindrana mankany GTK3?
Tena tiako ny fivoaran'ny xfce, na dia eo aza ny fitaovana an-tsarimihetsika sy ny horonantsary tiako ny hafa noho izay tsy misy toerana misy azy, na izany aza ny ambiny dia tena tsara ho an'ny fampisehoana sy ny fluidity, indrindra ho an'ireo varavarankely sy terminal am-polony izay sokafako, ny sosokevitra A dia ny hametraka azy ao amin'ny Ubuntu, satria miasa tsara ny Xubuntu, fa mila mametraka rindranasa Gnome 3 hafa manodidina ianao, toa somary tara ihany, na dia tsy dia ratsy aza izany.
Androany elav dia nijery ny fanesoana nataonao tao amin'ny bilaogin'i elav an'ny xfce 4.8 ary tsara ny fahitana azy amin'ity kinova ity amin'ny mangarahara.
O__O Iza amin'izy ireo?
Ny lahatsoratra dia tamin'ny 7 Jolay 2009, dia ho hafahafa aminao ny nivoahako niaraka tamin'ireo zavatra ireo saingy nanaraka anao aho taloha tao amin'ny bilaogy hafa ary izany no nahatongavako tao amin'ny FromLinux, zavatra iray hafa arahiko dia asehoy anay ny biraonao izay mbola tena be dia be ankehitriny, ary izany dia ao anaty atiny be mpitsidika indrindra izay misy valiny 3572, ilay natombok'ireto andalana ireto:
"Tsy fantatro raha nanana an'io hevitra io izy ireo taloha, tsy fantatro akory raha afaka manatanteraka izany isika, fa maninona isika no tsy manao karazana galeria hijerena ny fananantsika ireo birao?"
Inona no nanaraka:
«Hatramin'ny nanombohanao ny kofehy dia andao hatomboka amin'ny biraonao, ianao no namorona azy, sa tsy izany?
Manomboka izao tsy ho. Voasoratra anarana eto aho ary mizaha tsikelikely ny forum, avy eo apetrako eto amin'ny toerana misy ahy ny birao 4.
: O Fa ny Mockup kosa dia tao Xfceando .. tsara .. izao hitako izao ary mahatonga ahy ho ratsy tarehy hahaha
Marina ny teninao, izay mitranga dia ny nanarahako anao tao amin'ny bilaoginao hafa, tsy fantatro ny momba an'i Xfceando, ary ny Mockup tsy ratsy tarehy, tokony havaozina kely xD izy io.
Carlos JC dia hoy izy:
Tena mahaliana ny toerana misy ny mpamorona XFCE. Raha "nirohotra" niaraka tamin'ny kinova vaovaon'izy ireo ny KDE sy ny GNOME, ny XFCE kosa dia manohana fivoarana mandanjalanja kokoa. Na dia tena mahafinaritra ny maso aza ny KDE4 sy ny GNOME3 ary misy fanavaozana mahaliana maro, dia mitondra olana lehibe ihany koa izy ireo izay misy fiatraikany ratsy amin'ny traikefan'ny mpampiasa ...
Taorian'ny "fahafatesan'ny" GNOME2, XFCE no lasa DE tiako indrindra, na dia tsy mampiasa DE intsony aza aho ...
Valiny tamin'i Carlos JC
Azoko atao ve ny milaza amiko hoe inona ny lohahevitr'ireo sary masina ao amin'ny sarin'i Tunar?
Izy ireo no lahatahiry Faenk mahatonga azy ireo hiankina amin'ny Faenza Dark.
Io no distro faharoa nanandramako ary nijanona ela teo aho mandra-pivoako ho debian.
Fa raha mandeha tsara dia ny tena tiako indrindra dia ny fanampiana ireo skoto mousepad sy ireo vaovao avy any thunar (izay raha ny fijeriko azy dia tsara kokoa noho ny nautilus).
Ignacio Menz dia hoy izy:
Mamelombelona ny lahatsoratra ..
Mbola manantena ny xfce 4.12 🙂
Valiny ho an'i Ignacio Menz
eliasmtz dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa misy hevitra tsara hanaovana izay niraisan'ny firaisankina, ny menio manerantany, ilay menio sarotra amin'ny ankamaroan'ny rindranasa izay manana toerana be loatra amin'ny solosaina finday, ny piksela rehetra dia mendrika amin'ny monitor kely iray; tokony hampiharin'izy ireo izany amin'ny ho avy 😉
Mamaly an'i eliasmtz
Luis Alejandro CV dia hoy izy:
mahaliana hapetrako izy
Mamaly an'i luis alejandro cv
joaoco dia hoy izy:
Adala, tiako ho avy izy, avy amin'Andriamanitra, tena tsara, izay tiako fotsiny
Mamaly an'i joaoco
XFCE tena kely no nampiasako, tiako ny nanolotra birao kely sy milamina, saingy misy zavatra tsy naharesy lahatra ahy fa nahita hadisoana tamin'ny fandikan-teny aho ary nampakatra ny Bug ary faly aho fa nampandre ahy izy ireo fa nekena ilay bibikely (http://git.xfce.org/xfce/xfdesktop/commit/?id=d5efeebceddef920630ce0551035e20ad65fd461) Na izany na tsy izany, ity kinova ity izay ho avy dia tena mampanantena fa hanana azy io ho solony amin'ny fotoana sasany aho. 😀